प्रकाश सपूतका भाईको बुढाबुढी मिडियामा - Nepal Insider
Home/समाचार/प्रकाश सपूतका भाईको बुढाबुढी मिडियामा
काठमाडौं / पछिल्लो समयमा नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा निकै राम्रो राम्रो प्रतिभाहरुको आगमन संगै यो समयमा नेपाली गीत संगीत छेत्रको किङ्ग मानिने प्रकाश सपुतको आफ्नै भाई देवेन्द्रले आफ्नो दोस्रो कोसेली लिएर बजार आउनु भएको छ । गायक मोडल तथा निर्देशक समेत रहेका देबेन्द्रको पहिलो गीत कसरी निकै हिट भएको थियो ।
मायालु जोडीको प्रेमिल समयलाई चटपटे तरिकामा प्रस्तुत गरिएको र यसलाई दर्शक श्रोताले रुचाउने अपेक्षा गरेको गायक सर्जक देवेन्द्र बब्लुले बताए । फरक स्वादको गीतमा आवाज शब्द र संगीत संयोजन बब्लुकै रहेको छ ।
सहोदर भाईको पहिलो गीत कसरी आउदा रहर मात्रै ठानेका प्रकाश सपुतले पछिल्लो गीतसँगै राम्रो सम्भावना देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कसरी आउदा चाहि रहर मात्रै होला भन्ने लागेको थियो ।
तपाईको भाईले पनि राम्रो गाउदो रैछनी भन्नेहरु थुप्रै भेटे’ सपुतले भने- ’ यो बिचमा उसले आफुले बनाएका केहि धुनहरु सुनायो र भन्यो, दाई अन्तत मेरो पनि मुख्य कर्म संगित नै हुन्छ जस्तो छ । मलाई यसमा आनन्द र आत्मविश्वास आईरहेको छ ।”
अब उसको क्षमता, प्रयास र आत्मविश्वास लाई अगाडि बढाउने काम श्रोता दर्शककै भएको गायक सपुतको भनाई छ । यसमा आफ्नो शुभेच्छा र सहयोग सदैव रहने उनले आदर्श अनलाइनलाई बताए ।
बब्लु कै कन्सेप्ट रहेको भिडियो प्रविन भट्टले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा बब्लु र संगीता गैरे छन् । बिशाल घिमिरेको स्क्रिप्ट रहेको भिडियो अनिल के मानन्धरको छायांकन प्रविनको सम्पादन र ग्राफिक डिजाइन पवन गायकको रहेको छ ।
डान्स मात्रै हैन गीत पनि यत्ति मिठो गाउँछिन् तेरिया मगर, सार्बजनिक भयो उनको पहिलो कभर गीत (भिडियोसहित)
मैले जन्मेदेखि मृ’त्यसम्म तिरेको कर केका लागि ? मन्त्री र हाकिमलाई महँगाे गाडी किन्न ?
टिपरले ठक्कर दिदाँ श्रीमतीको आँखा अगाडी नै श्रीमानको मृत्यु